မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate (778571-57-6) သည်ယနေ့စျေးကွက်တွင်မဂ္ဂနီစီယမ်ဆေးများအများဆုံးစုပ်ယူနိုင်သောပုံစံဖြစ်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည်အများအားဖြင့်အစားအစာများတွင်ပါ ၀ င်ပြီးလူ၏ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်စနစ်အတွင်းရှိဆဲလ်တုံ့ပြန်မှု ၆၀၀ တွင်အသုံးပြုသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်မဂ္ဂီအမည်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ဦး နှောက်အတွင်းရှိမဂ္ဂနီစီယမ်အဆင့်များကိုတိုးတက်စေသည့်တစ်ခုတည်းသောဆေးဖြစ်သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိကိုယ်တွင်းရှိကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ (သို့) ဆဲလ်များသည် ၄ ​​င်း၏တာ ၀ န်များကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်မဂ္ဂနီစီယမ်လိုအပ်သည်။ ဤဓာတ်သတ္တုသည်အရိုးကျန်းမာရေး၊ ကြွက်သား၊ နှလုံးနှင့် ဦး နှောက်၏လည်ပတ်မှုကိုမှန်ကန်စေသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းမဂ္ဂနီစီယမ်သည်အိပ်စက်ခြင်းပြproblemsနာများကိုကုသရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။ ယနေ့စျေးကွက်တွင်မဂ္ဂနီစီယမ်အောက်ဆိုဒ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ် citrate နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်ကလိုရိုက်အပါအဝင်မဂ္ဂနီဆီယမ်ဖြည့်စွက်အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။ ဤပုံစံများအားလုံးသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဓာတ်သတ္တုအဆင့်အတန်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဆဲလ်နှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါလှုပ်ရှားမှုများကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။
အဆိုပါကောင်းသောသတင်းဖြစ်ပါတယ် မဂ္ဂနီစီယမ်ကို L-threonate အမှုန့် အွန်လိုင်းနှင့်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိစတိုးဆိုင်များတွင်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များအတွက်သင်ဆေးဝါး၏ဆေးညွှန်းကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှရယူရန်သေချာစေပါ။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်စနစ်တွင်အကျိုးရှိသလောက်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံသောက်သုံးသည့်အခါပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အခြား nootropic ဆေးများသောက်သုံးခြင်းကဲ့သို့ပင်သင်၏ဆရာ ၀ န်ကိုသောက်သုံးမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးတွင်ပါဝင်ခြင်းသည်သင့်အားအရည်အသွေးနှင့်အထင်ကြီးဖွယ်ရလဒ်များရရှိစေသည်။
ဘယ်လိုမျိုး မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate အလုပ်လုပ်?
အဓိကအားဖြင့်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်စနစ်အတွင်းရှိမဂ္ဂနီဆီယမ်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီးသင်၏ဆဲလ်နှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါလည်ပတ်မှုတိုးတက်စေရန်ကူညီသည်။ အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမဂ္ဂနီစီယမ်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်များ၏ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်ဓာတ်သတ္တုကိုနေ့စဉ်နှင့်အမျှနေ့စဉ်နေ့စဉ်စားသောအစားအစာများစွာတွင်ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံဓာတ်သတ္တုအဆင့်များသည်သင့်ကိုကွဲပြားသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ ဥပမာ၊ မဂ္ဂနီစီယမ်ပါဝင်မှုနည်းပါးခြင်းကစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အားကစားသမားများသည်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်တွင်မဂ္ဂနီဆီယမ်မလုံလောက်ပါကကြွက်တက်ခြင်းနှင့်တွန့်ဆုတ်ခြင်းများခံစားနေရသည်။
သင်၏အစားအစာတွင်ရရှိနိုင်သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမဂ္ဂနီစီယမ်အပြင်၊ ဓာတ်သတ္တုသည်သင်၏ဆဲလ်များနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများလည်ပတ်မှုကိုအဆင်ပြေစေရန်မလုံလောက်ပါကသင့်ဆရာဝန်ကမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကိုညွန်းနိုင်သည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်များသည်မတူကွဲပြားသောကြောင့်မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့ခြင်းကိုခံစားရသောအခါလူတိုင်းတွင်အလားတူပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်မဂ္ဂနီဆီယမ်တိုးမြှင့်သည့်အားဖြည့်ဖြည့်တင်းဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ သင်၏မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့မှုအဆင့်ပေါ် မူတည်၍ မှန်ကန်စွာအသုံးပြုသောအခါမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်သိသာထင်ရှားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေသည်။
သင်သည်သင်၏မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သောက်သုံးသောဆေးကိုသောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ထဲအလျင်အမြန်စုပ်ယူပြီးချက်ချင်းလက်ငင်းစတင်အလုပ်လုပ်သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်မဂ္ဂနီဆီယမ်လုံလောက်စွာရရှိခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည် သိမှု function ကို နှင့်မှတ်ဉာဏ်, ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများနှင့်အာရုံကြောများ၏သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုမြှင့်တင်ရန်အပြင်အခြားကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများလုံလောက်သောလည်ပတ်မှုတိုးမြှင့်။ သင်၏အစာအိမ်တွင်မဂ္ဂနီစီယမ်ဓာတ်သတ္တုသည်အစာအိမ်အက်ဆစ်များကိုပျက်ပြယ်စေပြီးအူအတွင်းမှထိုင်ခုံများကိုရွေ့လျားစေသည်။
Wisepower သည်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကုန်ကြမ်းကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် ၃၀၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိရှိသည်။
Is မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate အိပ်တာလား
ဟုတ်ကဲ့၊ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်အိပ်စက်ခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ လူအများအပြားတွင်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းအိပ်စက်ခြင်းနှင့်အိပ်မပျော်ခြင်းသံသရာကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏အိပ်ချိန်ပုံမှန်လုပ်ခြင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကဖိန်းဓာတ်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ သို့သော်သင်လိုချင်သောရလဒ်များကိုမရရှိသေးပါ။ သို့သော်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကဲ့သို့သောဖြည့်စွက်ဆေးများသည်အိပ်စက်အနားယူရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်ကဲ့သို့သောဓာတ်သတ္တုများသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်စနစ်အပေါ်သက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးရှိပြီးအိပ်စက်ခြင်းကိုအားပေးသည်။ ထို့ကြောင့် မဂ္ဂနီစီယမ်မရှိခြင်း အိပ်မပျော်စေနိုင်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ဦး တည်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဆယ်လူလာလုပ်ငန်းများကိုတိုးတက်စေပြီးနောက်ဆုံး၌သင့်အားအိပ်စက်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ အိပ်စက်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ရာတွင်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏အောက်ပါအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။
(1) ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဦး နှောက်ကိုအနားယူရန်ကူညီပါ
သင်သည်ကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းအတွက်သင်၏ ဦး နှောက်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်အနားယူရမည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏စနစ်တွင်မဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏလုံလောက်မှုရှိခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်များကိုအေးဆေးငြိမ်သက်စေခြင်းအတွက် parasympathetic အာရုံကြောစနစ်ကိုသက်ဝင်စေခြင်းဖြင့်သင်၏စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသက်သာစေသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည်သင်၏ ဦး နှောက်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်လုံးအချက်ပြမှုများကိုပေးပို့ရန်တာဝန်ရှိသော neurotransmitter ကိုထိန်းချုပ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းသည်အိပ်စက်ခြင်းစက်ဝန်းကိုလမ်းညွှန်ရန်တာဝန်ရှိသောမယ်လတိုနင်ဟော်မုန်းကိုလည်းထိန်းညှိပေးသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည် gamma-aminobutyric acid (GABA) receptors များနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး၎င်းသည်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအားအေးဆေးမှုအတွက်တာဝန်ရှိသော neurotransmitter ဖြစ်သည်။ GABA သည် Ambien ကဲ့သို့အိပ်စက်ခြင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် neurotransmitter အတူတူဖြစ်သည်။ အာရုံကြောစနစ်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်သင်၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအိပ်စက်ရန်ပြင်ဆင်ပေးသည်။
(၂) ။ မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့ခြင်းသည်အိပ်စက်ခြင်းကိုနှောင့်ယှက်သည်
မင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်အလုံအလောက်မရှိခြင်းဟာအိပ်စက်ခြင်းပြinsနာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဓာတ်သတ္တုအဆင့်အတန်းကိုတိုးတက်စေပြီးသင့်ကိုအရည်အသွေးကောင်းသည့်အိပ်စက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအရပုံမှန်အိပ်စက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးမဂ္ဂနီစီယမ်အဆင့်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ သို့သော်မဂ္ဂနီစီယမ်မြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်ကျမှုနှစ်မျိုးလုံးသည်အိပ်စက်ခြင်းပြleadနာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆေးမသောက်မီဆေးစစ်ရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်ကို L-threonate ဆေးတခါသောက်.
မတူညီသောအကြောင်းပြချက်များနှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများသည်မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ သင်၏အစာခြေလမ်းကြောင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအစာခြေရောဂါများသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သတ္တုဓာတ်နှင့်ဗီတာမင်များကိုမှန်ကန်စွာစုပ်ယူရန်ခက်ခဲစေပြီးမဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့စေသည်။ ဆီးချိုရောဂါနှင့်အင်ဆူလင်ကိုခုခံနိုင်မှုသည်မဂ္ဂနီစီယမ်များစွာဆုံးရှုံးမှုနှင့်လည်းဆက်နွယ်သည်။
သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်မဂ္ဂနီဆီယမ်နည်းသောအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်အသက်အရွယ်သည်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသက်ကြီးရွယ်အိုများသည်အိပ်စက်ခြင်းပြasနာများကဲ့သို့မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့သောရောဂါလက္ခဏာများခံစားရနိုင်ခြေမြင့်မားသည်။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးသူများသည်ဓာတ်သတ္တုချို့တဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်လုံလုံလောက်လောက်ရှိခြင်းသည်သင်အိပ်စက်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး၎င်းသည်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်အိပ်စက်အနားယူခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းကိုရရှိရန်သင့်အားကူညီသည်။ ဓာတ်သတ္တု၏ ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်သင့်အားညအိပ်အနားယူရန်လွယ်ကူစေသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည်မော်လီကျူးများအားအာရုံခံဆဲလ်များနှင့်စည်းနှောင်ခြင်းမှတားဆီးပေးသောကြောင့်အာရုံကြောစနစ်ကိုငြိမ်သက်စေသည်။ လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးအရမဂ္ဂနီစီယမ်သည်အိပ်စက်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်မည်မျှအရေးကြီးသည်ကိုပြသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုများအရသက်ကြီးရွယ်အိုများအကြားအိပ်စက်ခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရာတွင်မဂ္ဂနီစီယမ်၏သက်ရောက်မှုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
ဦးနှောက်ကို rလေးစားပါတယ် iမဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ၏ mpact
ဦး နှောက်အတွင်းရှိမဂ္ဂနီစီယမ်အဆင့်များကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကိုမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ဤမူးယစ်ဆေးသည်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ထဲသို့လျင်မြန်စွာစုပ်ယူပြီးမဂ္ဂနီစီယမ်ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်သောရောဂါ (ADHD) ကဲ့သို့သော ဦး နှောက်အိုမင်းခြင်းလက္ခဏာများကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေရန်စိတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သည်။ ဒါ ADHD နှစ်များတစ်လျှောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွံ့ဖြိုးလာပြီး၎င်းကို၎င်း၏ကန ဦး အဆင့်များတွင်သတိပြုမိရန်ခဲယဉ်းသော်လည်း၊ အခြေအနေသည်သိမြင်မှုကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသောလူကြီးများသည်မဂ္ဂနီစီယမ်နည်းသောအစားအစာများကိုစားသုံးကြသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိမဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏကိုလျှော့ချသောအစာခြေပြproblemsနာများနှင့်ဆီးချိုရောဂါကဲ့သို့သောအခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေများလည်းရှိသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည်အာရုံကြောအမျိုးမျိုး၊ ကြွက်သားဆဲလ်များနှင့်မတူညီသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်သည်။
ဦး နှောက်ထဲတွင်မဂ္ဂနီစီယမ်မလုံလောက်ခြင်းကအိပ်စက်ခြင်းရောဂါများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းစသည့်ပြproblemsနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးမှတ်ဥာဏ်နှင့်သိမြင်မှုလုပ်ဆောင်မှုများကိုပါအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာလူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။ သို့သော်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်သင့် ဦး နှောက်အတွင်းရှိဓာတ်သတ္တုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့်စမ်းသပ်မှုများက ဦး နှောက်အိုမင်းခြင်းစနစ်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ရာတွင်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate စွမ်းအားကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ ထင်ရှားသောတွေ့ရှိချက်မှာမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်ကိုးနှစ်ကျော် ဦး နှောက်အိုမင်းခြင်း၏သက်ရောက်မှုများကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးကသင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ဆဲလ်များအကြားဆက်သွယ်မှုဆက်သွယ်မှုဖြစ်သော synapses များ၏သိပ်သည်းဆကိုတိုးပွားစေတယ်။ Synaptic သိပ်သည်းမှုဆုံးရှုံးခြင်းသည်သိမြင်မှုကျဆင်းခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ကျုံ့ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုများအရ ၁၂- ပတ်ကြာသည့်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate အုပ်ချုပ်မှုသည်သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေပြီး ဦး နှောက်အိုမင်းခြင်းကိုပြောင်းပြန်လုပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်အသက်ကြီးလာသောအခါ ဦး နှောက်ဆဲလ်အရေအတွက်ကျဆင်းလာခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ဆဲလ်များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ၄ င်းတို့၏ ဦး နှောက်ဆိုင်ရာ switchboards များကို synapses ဟုခေါ်သောကြောင့်ကျုံ့သွားသည်။
synapses ဆုံးရှုံးမှုသိမြင်မှုကျဆင်းမှုနောက်ကွယ်မှအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် synapses သိပ်သည်းဆကိုမြှင့်တင်ရန်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate စွမ်းရည်သည်ယနေ့စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးမှတ်ဉာဏ်နှင့်မှတ်ဥာဏ်တိုးမြှင့်မှုဖြစ်စေသည်။ သင့် ဦး နှောက်အတွင်းရှိမဂ္ဂနီစီယမ်ပမာဏများများလုံလုံလောက်လောက်ရှိပါက ဦး နှောက်အိုမင်းခြင်းပြproblemsနာများကိုပြန်ပြောင်းနိုင်လိမ့်မည်။ ဆေးကုသမှုတိုးတက်မှုကိုစစ်ဆေးရန်ဆေးသောက်ချိန်မတိုင်မီ၊
ဘာလဲ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ၏အကျိုးကျေးဇူးများ?
ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးနှင့်အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကိုသောက်သုံးခြင်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောအကျိုးကျေးဇူးများမဟုတ်ပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်များနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအားလုံးနီးပါး၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အဆိုပါဆေးသည်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မှန်ကန်စွာလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဓာတ်သတ္တုဖြစ်သည်။ ဤတွင်အခြားအချို့ရှိပါသည် မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate အကျိုးကျေးဇူးများ;
(၁) ။ စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျှော့ချ
ဒီအခြေအနေနှစ်ခုဟာဒီနေ့ခေတ်လူအများစုအတွက်အသုံးများတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ သို့သော်မဂ္ဂနီစီယမ်သည်စိတ်ကျဝေဒနာနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်သက်သာစေရန်စွမ်းရည်ကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ အများအားဖြင့်ဤစိတ်အခြေအနေနှစ်ခုသည်မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင့် ဦး နှောက်ထဲတွင်ဤဓာတ်သတ္တုအလုံအလောက်မရှိလျှင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတို့ကိုခံစားရနိုင်သည်။
ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စေရန်မဂ္ဂနီစီယမ်စွမ်းရည်သည်စိတ်အခြေအနေနှစ်ခုကိုသက်သာစေသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate စိုးရိမ်မှုကိုဆရာ ၀ န်၏ညွှန်ကြားချက်အရပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရယူသင့်သည်။
(၂) ။ ကျန်းမာသောအရိုးများနှင့်ကြွက်သားများကိုအားပေးသည်
မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့မှုသည်ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်းနှင့်အရိုးအားနည်းခြင်းများကိုဖြစ်စေသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်လူကြီးများအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သောအရိုးပွရောဂါကိုကုသနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အားကစားသမားလေ့ကျင့်ခန်းအပြီးနှင့်အေရိုးဗစ်နှင့်အောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်ကြွက်သားများပြန်လည်ထူထောင်၌သူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးကိုယူ။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်များသောအားဖြင့်၎င်းဆေးကိုကျန်းမာရေးအခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက်ကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဤဆေးသည်သွေးလွှတ်ကြောခွဲစိတ်ခြင်း၊ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်အခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေများအကြား၌အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါ၊
ဘယ်လောက်လဲ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကျွန်တော်ယူသင့်ပါသလား
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ပါးစပ်မှတဆင့်ခေါ်ဆောင်သွားသည့်ခံတွင်းဆေးဖြစ်သည်။ ဆေးကိုတက်ဘလက်နှင့်အမှုန့်ပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော် မဂ္ဂနီစီယမ်ကို L-threonate သောက်သုံးသော အသုံးပြုသူနှင့်ကုသမှုအောက်ရှိအခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင့်အတွက်မှန်ကန်သောဆေးသောက်ရန်သင့်ဆရာဝန်ကအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာထုတ်လုပ်သူများသောက်သုံးသောအကြံပြုချက်သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်စနစ်များမတူသောကြောင့်အမြဲတမ်းဆေးစစ်ရန်သွားသည်။
၁၉-၃၀ နှစ်အတွက်အကြံပြုထားသောမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သောက်သုံးမှုသည်အမျိုးသမီးများအတွက်တစ်နေ့လျှင် ၄၀၀ မီလီဂရမ်နှင့်အမျိုးသားများအတွက် ၃၁၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ ၃၁ နှစ်နှင့်အထက်အမျိုးသားများသည်တစ်နေ့လျှင် 19mg နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် 30mg သောက်သင့်သည်။ အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်ကြားကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်အကြံပြုထားသောအစားအသောက်ထောက်ပံ့ကြေး (RDA) သည် ၄၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီး၊ ၁၉ နှစ်မှ ၃၀ နှစ်အကြားရှိသူများသည် ၃၅၀ မီလီဂရမ်နှင့် ၃၁-၅၀ နှစ်များသည် ၃၆၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။
နို့တိုက်မိခင်များအနေဖြင့်လည်းဤဆေးကိုသောက်သုံးနိုင်သည်။ တစ်နေ့လျှင် ၁၄-၁၈ နှစ် ၃၆၀ မီလီဂရမ်၊ အသက် ၁၉ နှစ်မှ ၃၀ နှစ်အတွင်းရှိထောက်ခံသူများသည် ၃၁၀ မီလီဂရမ်၊ ၃၁-၅၀ နှစ်များသည်ဆေး ၃၂၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည် ရှစ်နှစ်ကျော်သက်တမ်းအတွက်မည်သူမဆိုမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate နေ့စဉ်အထက်အဆင့်သောက်သုံးမှုသည် ၃၅၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်နို့တိုက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကိုကျန်းမာရေးအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ သောက်သုံးသူသည်သုံးစွဲသူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားသည်။ ဥပမာ၊ အစာမကြေခြင်း (dyspepsia) ကုသမှုတွင်အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောပမာဏ 400-1200mg မှတစ်နေ့လျှင်လေးကြိမ်အထိခွဲထားသင့်သည်။
အကောင်းဆုံးသိမှုအကျိုးခံစားခွင့်အတွက်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်သောက်ရန် ၁၀၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကိုအိပ်စက်ခြင်းပြtakingနာများအတွက်သောက်သောအခါအမျိုးသားများအတွက်တစ်နေ့လျှင် ၄၀၀ မှ ၄၂၀ မီလီဂရမ်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် ၃၁၀-၃၆၀ မီလီဂရမ်ကြားဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate (778571-57-6) သောက်သုံးသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်; ထို့ကြောင့်သင်၏ဆေးဝါးမှသင့်လျော်သောဆေးညွှန်းကိုသေချာစွာရယူပါ။
Wဦး ထုပ်အစားအစာများအတွက်မြင့်မားသောဖြစ်ကြသည် မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate?
အပြင်ယူပြီး မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သင့် ဦး နှောက်အတွင်းရှိမဂ္ဂနီဆီယမ်ပမာဏကိုမြှင့်တင်ရန်သင်သည်ဤဓာတ်သတ္တုကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။ ဤအစားအစာများသည်သင့်စိတ်ထဲရှိလိုအပ်သောမဂ္ဂနီဆီယမ်အဆင့်ကိုရရှိရန်ကူညီပေးပြီးဓာတ်သတ္တုအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်သည်။ ဤတွင်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကြွယ်ဝသောထိပ်တန်းအစားအစာအချို့ကိုဖော်ပြသည်။
အမှောင်ချောကလက်- ၎င်းသည်အရသာရှိပြီးကျန်းမာသည်နှင့်အမျှ ၆၄ မီလီဂရမ်မဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုရရှိသည်။ ၎င်းသည် RDI ၏ ၁၆% ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မှောင်မိုက်သောချောကလက်သည်ကြေးနီ၊ သံ၊ မန်းဂနိစ်များနှင့် prebiotic fiber များပေါများသည်။
ထောပတ်သီး- ဤအရသာရှိပြီးအာဟာရပြည့်ဝသောအသီးသည်သင့်အား RDI ၏ ၁၅% ခန့်ဖြစ်သောမဂ္ဂနီစီယမ် ၅၈ မီလီဂရမ်ကိုပေးစွမ်းသည်။ ဒီအသီးသည်ဗီတာမင် B၊ K နှင့်ပိုတက်ဆီယမ်များစွာရရှိသည်။
အခွံ ထို့အပြင်အကောင်းဆုံးမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သဘာဝရင်းမြစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သီကုံးပုလင်း ၁- အောင်စသည် ၈၂ မီလီဂရမ်မဂ္ဂနီဆီယမ်ရှိပြီး RDI ၏ ၂၀% ရှိသည်။
တရား ၀ င် ပဲ၊ ပဲ၊ ပဲနှင့်ပဲပုပ်များကဲ့သို့မဂ္ဂနီစီယမ်အပါအ ၀ င်မတူညီသောတွင်းထွက်ပစ္စည်းများပေါကြွယ်ဝသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပဲချက်ပြုတ်ထားသောပဲတစ်ခွက်တွင်မဂ္ဂနီဆီယမ် ၁၂၀ မီလီဂရမ်ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည် ၃၀% သော RDI ဖြစ်သည်။
ယ်ယူရန် မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate အွန်လိုင်း
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate အမှုန့်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များတွင်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သောဆေးဖြစ်သည်။ သင်ဤဆေးကိုသင်၏ရုံးသို့မဟုတ်အိမ်၏သက်သောင့်သက်သာမှ ၀ ယ်ယူပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူမှဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပို့ပေးမည့်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိပြီးအတွေ့အကြုံရှိသောရောင်းချသူထံမှသင့်အားလမ်းပြရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်း Nootropics သိုလှောင်ရုံ Walmart, Amazon နှင့် Magnesium L-threonate vitamin Shoppe အပါအ ၀ င်ဒီဆေးကိုသိုလှောင်ထားပါ.
အခြားအွန်လိုင်းရောင်းချသူများလည်းရှိသော်လည်းသင်၏ကြိုတင်မှာယူမှုမပြုမီ Nootropic ရောင်းချသူနှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုသောအချက်အလက်များကိုရယူရန်သင်၏သုတေသနကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်ပါ။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ၀ ယ်ယူခြင်းသည်အရည်အသွေးနိမ့်သောကြောင့်ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်သင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ဆေးအတုများသည်သင့်အားပြင်းထန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိမဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate အွန်လိုင်းရောင်းသူများအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန် Nootropics သုံးသပ်ချက်များကိုဖတ်ပါ။ လက်ရှိတွင်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate Amazon နှင့်မဂ္ဂနီစီယမ် L-ထရွန်နိတ် Walmart သည်လူကြိုက်အများဆုံး Nootropic အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းစတိုးများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သင့်ကိုမတူညီသောဈေးဝယ်ရန်ခွင့်ပြုသည် Nootropic ဖြည့်စွက် သင့်ဖုန်း၊ လက်တော့၊ သို့မဟုတ်တက်ဘလက်မှတဆင့်။ ကုန်ပစ္စည်းသည်သင်၏တည်နေရာသို့မည်မျှကြာမြင့်စွာရောက်ရှိနိုင်ပြီးသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်သိပ္ပံနည်းကျလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့် ဦး နှောက်အိုမင်းခြင်းလက္ခဏာများကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ဆဲလ်များနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများလည်ပတ်ခြင်းအတွက်အရေးပါသောဓာတ်သတ္တုဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားပါသည် မဂ္ဂနီစီယမ်သတင်းရင်းမြစ်ဆေးဝါးများမှသဘာဝအစားအစာများအထိ။ မဂ္ဂနီစီယမ်မရှိခြင်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအား ADHD ကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးအခြေအနေအမျိုးမျိုးနှင့်ထိတွေ့စေသည်။ သို့သော်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ADHD ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်မဂ္ဂနီစီယမ်အဆင့်နိမ့်သူများအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်၊ ဒီဆေးကိုခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်မှာနာကျင်မှုကိုသက်သာစေခြင်း၊ အရိုးများနှင့်ကြွက်သားကျန်းမာရေးတိုးမြှင့်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုများတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်မဂ္ဂနီဆီယမ်အဓိကအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်တရားဝင်ဆေးဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင့်ကိုရလဒ်ကောင်းများအတွက်ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင်ယူသင့်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အွန်လိုင်းစတိုးများ၌ရရှိနိုင်သည်။ သင်၏ဆရာဝန်ကိုအကြောင်းကြားစရာမလိုဘဲသောက်သုံးရန်အထက်သို့သို့မဟုတ်အောက်သို့ဘယ်တော့မျှမပြောင်းပါနှင့်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါကသင်၏ဆေးကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။ မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate နှင့်အခြားအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက nootropics ဝယ်, ဆေးပညာရှင်များနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Sun က, ဆိုးကျိုး, Weinger, JG, မော်စီတုန်း, အက်ဖ်, & လျူ, G. အ (2016) ။ intraneuronal မဂ္ဂနီစီယမ်အာရုံစူးစိုက်မှု၏မော်ဂျူမှတဆင့် L-threonate အားဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ synapse သိပ်သည်းဆ၏စည်းမျဉ်း။ Neuropharmacology, 108, 426-439 ။
Mazreku, IN, Ahmetaj, အိပ်ချ်, Aliko, V. , Bislimi, K. , Halili, အက်ဖ်, & Halili, ဂျေ (2017) ။ Lead Acetate, Vitamin C နှင့် Magnesium-L-Threonate နှင့်ကုသသောဆွစ်ဇာလန် Albino ကြွက်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအော်ဂဲနစ်များတွင် Catalase (CAT), ALT နှင့် AST ၏လုပ်ဆောင်မှု။ လက်တွေ့ & Diagnostic သုတေသနဂျာနယ်, 11(11) ။
Mickley, GA, Hoxha, N. , Luchsinger, JL, Rogers, MM, & Wiles, NR (2013) ။ နာတာရှည်အစာအာဟာရမဂ္ဂနီစီယမ် - L - ထရွန်နိတ်သည်မျိုးသုဉ်းခြင်းကိုမြန်စေပြီးအရသာခံခြင်းကိုမနှစ်သက်သည့်အလိုအလျောက်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ, 106, 16-26 ။
Abumaria, N. , Luo, L. , Ahn, M. , & Liu, G. အ (2013) ။ မဂ္ဂနီစီယမ်ဖြည့်စွက်ဆေးသည် Spatial-context ပုံစံခွဲခြားခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး၊ အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ, 24(4), 255-263 ။
1. မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
2. မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
3. မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate သည်အိပ်စက်ခြင်းအတွက်ကောင်းပါသလား။
4. မဂ္ဂနီစီယမ် L-Threonate ၏သက်ရောက်မှုကိုပြန်ယူပါ
မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ၏အခြားအကျိုးကျေးဇူးများ ၅ ။
6. မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ဘယ်လောက်ယူသင့်ပါသလဲ။
7. မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate တွင်မည်သည့်အစားအစာများမြင့်မားပါသလဲ။
အွန်လိုင်းတွင်မဂ္ဂနီစီယမ် L-threonate ကိုဝယ်ပါ